အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: ကျောက်တုံးတွေ ပိနေတဲ့မြို့
43 Responses to “ကျောက်တုံးတွေ ပိနေတဲ့မြို့”
တွားလည်ရရင် အကောင်းသားလား။ ပျော်စရာကြီးနော်
ွသွားလည်ချင်လိုက်တာနော် ... အခုလိုမြင်လိုက်ရတာ စိတ်ဝင်စားဖို့ အရမ်းကောင်းပါတယ် ... ဓာတ်ပုံသွားရိုက်ချင်တယ် ... :)
သွားဘူး..။ မတော် ကိုယ့်အလှည့်ကျမှ ပိကျရင် ဒွတ်ခ..
လူဆိုတာ တစ်ခါပဲသေရမှာမှန်ပေမဲ့ အဲဒီလိုတော့မနေရဲဖူး အသဲယားတယ်မရေး အိပ်ရင်တောင်စိတ်ဖြောင့်ဖူး တောင်များပြိုကျလာမလားလို့ တွေးပြီးပေါ့ မိုးကအဲဒီလိုမမရဲ့ သွားတော့လည်ချင်ပါတယ်။ မနေရဲဖူး
နည်းနည်းတော့ လန့်သလိုပဲ ဟီးဟီး
ပတ္တမြား ဆိုတာ ကျောက်မျက် နားလည်သူလက်ထဲ ရောက်မှအဘိုးတန် တာတဲ့ ၊ ဇေသာရေး ရင် နောက်တီးနောက်တောက်နဲ့ ၊ ဟာသဖြစ်သွားနိုင်တယ် ချောလို တည်တည်ခံ့ခံ့ လေးထွက်လာမှာမဟုတ်ဘူး ချောက ပညာရှင် အရမ်းပီသတာဘဲ ။ (သောက်ရမ်းတော်တယ်) အားကျတယ် အတုခိုးပေမဲ့ လိုက်လုပ်တာ ရမှမရတာ ၊
နေချင်ဘူး... အသက်ရှူကြပ်မယ်... လေ၀င်လေထွက်က တစ်ဖက်သတ်ဖြစ်နေတယ်.... အန္တာရယ်ကြီးတယ်.... ဘာကျန်သေးပါလိမ့်..:D.. သွားတော့လည်ချင်တယ်...
မိုးပြိုကျရင် မဟုတ်ဘူး.. တောင်ပြိုကျရင် ဆိုပြီး တစ်ချိန်လုံး စိုးရိမ်နေရလိမ့်မယ်..
သွားတော့ လည်ချင်သား.. :D
ပျော်စရာကြီးနေမှာပဲ ထူး၂ဆန်း၂ နေရာမှာနေရတော့ ဒါပေမယ့် ကြက်တူရွေး လို ညအိပ်ရင်တော့ ခြေထောက် ထောင်အိပ်ရမယ့် အဖြစ် ပြိုကျမှာကြောက်လို့ :)
ညီမတော့ သွားချင်တယ် .. နေပူမှာ မဟုတ်ဘူး .. တအိမ်နဲ့ တအိမ်ကနေ နီးနီးလေးနဲ့ ဝေး ဖြစ်နေမယ်ထင်တယ် ..း)
ကျောက်ဆောင်အတွင်းက အိမ်လေးတွေက ကျောက်သားအရှိန်နဲ့ အေးမြနေမလားလို့ တွေးမိတယ်။
လည်တော့လည်ချင်တယ်။ နေတော့မနေရဲပါဘူး။ တော်ကြာ ကိုယ်နဲ့ကျမှ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ငလျင်မိနေမှာ စိုးလို့း))
လင့်ခ်ပေးတဲ့ ဇေ၊နှင်းမောင်နှမနှစ်ယောက်ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်တယ်။
အလည်တော့ သွားကြည့်ချင်တယ် အကြာကြီး မနေရဲပါဘူး :P
၃နာရီမျှ စိတ်ရှည်စွာ downloadပြီး ပုံမှ ပုံများကို အသည်းတယားယား ကြည့်ခဲ့ပါတယ်။
အနီနဲ့အဖြူကို တွဲဖက်ထားတာ စိတ်ဝင်စားစရာ..။
အလည်တော့ ရောက်ဖူးချင်ပါတယ်။ နေရမှာတော့..... ဟူး...။
ရောမခန်းမဆောင်ကြီးဆီတော့သွားချင်သားးး ဟိုးးးထိပ်ဆုံးထိတက်ပြီး မြင်ကွင်းတွေကြည့်ချင်တယ် ..း))
ကျောက်ဆောင်ကြီးတွေထဲ ရောက်နေသလိုဆိုပေမယ့် လွှင့်မျှောနေခြင်း..မျိုး.. ခံစားရတယ်...။
နှစ်ပေါင်းရာချီတဲ့ သမိုင်းကြောင်းက ခိုင်မြဲခြင်းကို ဖွဲ့ဆိုနေတာလား မသိပေမယ့်
အဖြူရောင် ပန်းချီကားချပ်များလို အိမ်ကလေးတွေထဲ လွှင့်မျှောမိတဲ့အခါ...။
အဲအဲ.....လှတော့လှတယ် အမချောရဲ့ ကြည့်နေရတာနဲ့တင် ခေါင်းပေါ်တစ်ခုခု တင်ထားရသလိုပဲနော် တစ်မျိုးလေးပေါ့ :)
ခင်တဲ့ (ချိုကျ )
နေရဲပါဝူးဗျာ..... မနေဝူးဂျာ :)
ပုံလေးတွေ ဖေါ်ဝပ်မေးက ရဘူးတယ်။ ကွန်ပြူတာနဲ့ ဖန်တီးထားတာ ထင်လို့။
ချောရေးပြမှ စပိန်ကမှန်း အသေးစိတ်သိရတယ်။ ခဏတော့ အလည်ရောက် ချင်တယ်။
အမြဲတော့ မနေရဲဘူး။ တို့လဲ ကြောက်တယ်...........
ထူးထူးဆန်းဆန်းနော်... ချောရေ... အားပေးနေတယ်...
ကျောက်တုံးပိတဲ့ မြို့တော်လေးကို ကြည့်သွားတယ်...
Thanks. I like it so much .......
တို့မမကတော့ ထူးထူးခြားခြားတွေကို ရှာဖွေတက်တယ်နော်... အခုလို ထူးထူးဆန်းဆန်းလေးတွေကို မြင်တွေ့ခွင့်ရတဲ့ အတွက် ကျေးဇူး အရမ်းတင်ပါတယ် မမချော ရေ...
ပုံကြည့်ရတာတင် အသက်ရှူ ကျပ်ချင်သလိုပဲ
နေတာ တော်တော်ကြာမှာ ခေါင်းပေါ်က ကျောက်တုံးတွေကို မေ့ထားလို့ ရနိင်မယ်။
သွားလည်ဖြစ်ရင်တော့ လိုလိုမယ်မယ် ဦးထုပ်ဆောင်းထားရမယ်။
မတော် ပြိုကျရင် ဘယ်လို လုပ်မတုန်း နော့ ...။
လှတော့ လှတယ် ဒါပေမယ့် ကြောက်ဖို့ ကောင်းတယ်။ အလည်တော့ သွားချင်တယ်။ အမြဲတော့ မနေရဲဘူး။ မတော် ငလျင်လှုပ်လို့ ကတော့ တွေးတောင် မတွေးရဲဘူး။
ညီမ ရေးပြလို့သာ တွေ့ရတော့တယ် ထူးဆန်းလိုက်တာ အမ ရောက်ဘူးချင်လိုက်တာ
လူတွေ ရဲ့ ခံစားမှု ထွေပြားပုံတွေဟာ အချိန်တိုင်း ဖြစ်နေတာကို ပေါ်လွင်စေအောင် ရှာဖွေတင်ပြထားလို့ ကျေးဇူးတင်ရပါတယ် ချောရေ ...
အဲလိုထူးထူးဆန်းဆန်းနေရာမျိုးဆို သိပ်သွားချင်တယ်....အသဲတော့ ယားစရာနော်...
အသည်း တယားယား ရင်တအေးအေးနဲ့ ဖတ်သွားတယ်နော် .. နေတော့ နေကြည့်ချင်တယ် .. ကျောက်သားတွေနဲ့အရမ်းနီးနေတော့ အဲကွန်း မလိုလောက်ဘူးနော် .. အေးစက်နေမှာ .. ပြီးတော့ ခေါင်မိုးက မိုးယိုမှာလဲ မပူရတော့ဘူး .. ဒါမယ့်နော် နေတော့ နေကြည့်ချင်တယ်..ခဏဘဲ.. ကြောက်တယ် ... :D:D:D
စပိန်ရောက်ဖြစ်ရင်တော့ သွားလည်ဦးမယ် အမချောရေ။ အမြဲနေဖို့တော့ မကောင်းပါဘူး။ အလည်အပတ်လောက်ဘဲ ကောင်းပါတယ်။ အရမ်းလှတယ်နော်။
တကယ့်ကို ထူးထူးဆန်းဆန်းပါပဲ။ နေတော့မနေရဲဘူး ကြောက်တယ်။ :D
မိ ချော ရေ
အလည်တော့ သွားချင်တယ် ဗျာ။ ထူးထူးခြားခြားလေးတွေတင်ပေးလို့ ကျေးဖူးတင်ပါတယ်
ခင် တဲ့ ကိုမိုး
ဒီပို.စ်လေးကို တစ်ခြားဆိုက်မှာ ဖတ်ဖူးတယ်...အရမ်း သဘောကျလို. ကွန်မန်းလေးတောင်ပေးခဲ့သေး..ဘာသာပြန်မူကွဲဖြစ်မလားလို. တိုက်ကြည့်တော့ ရေးသားပုံ က တူတူပဲဖြစ်နေတယ်..
ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်ရေးထားတာလေးတွေ အားလုံး မျှဝေခံစားရအောင် လုပ်ပေးတယ်လို. သဘောထားပြီး ၀မ်းသာ လိုက်ပါ အမရယ်...